Maxaa ku jira Aaway? Sidee? Istaraatijiyadaha Suuqgeynta Webka | Martech Zone
Sabtida, Maarso 1, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Markaad furaysid dukaan, waxaad go'aansataa meesha la dhigayo dukaanka, waxa la dhigayo dukaanka, iyo sidee ayaad dadka ugu geyneysaa. Furitaanka websaydh, iyadoon loo eegin inay tahay aasaas tafaariiqeed iyo in kale, waxay u baahan tahay xeelado isku mid ah:
Maxaa ku dhacaya boggaaga?
Xagee shabakadaadu noqon doontaa?
Sidee dadku ku heli karaan?
Sideed u ilaalin doontaa iyaga?
Maxaa ku dhacaya boggaaga internetka?
Rumayso ama ha rumaysan, waxaa jira laba fure oo ah keydinta dukaan. Dadka badankood waxay fiiro gaar ah u yeeshaan waxa ugu muhiimsan, ee dadku iibsadaan. Midka labaad ma aha sida iska cad, in kastoo. Waa waxa dadku ka hadlaan. Tusaale? Waxaan ku soo noqdaa makhaayad kafeega maxalliga ah. Waxay leeyihiin wax walba oo uu jecel yahay kafeega - jawi deggan, shaqaale weyn, dad waaweyn iyo cunto aad u fiican.
Dukaanka kafeega wuxuu bixiyaa waxyaabo kale, in kastoo, dadku ka hadlaan. Waxay bixiyaan muusig toos ah Jimcaha iyo Sabtida. Waxay ku leeyihiin farshaxan qurux badan gidaar kasta oo martidu iibsan karto. Waxayna haystaan ​​qollo badan oo kooxaha ay ku booqdaan kuna kulmaan - marka waxay qabtaan shirarka Rugta Ganacsiga, Roob-sameeyeyaasha, Kooxaha Kaniisadaha, Habeennada Gabayada, iwm.
Dukaanka kafeega sifiican buu u shaqeeyaa! Qaxwaha kaligiis ayaa hayn doona ganacsiga ay haystaan ​​- laakiin aan lahayn miisaaniyad xayeysiin ah, waa waxyaabaha kale ee ka caawiya helitaanka macaamiisha cusub. Taasi waa sababta ganacsigu u sii kordhayo sanad kadib.
Websaydhkaaga ayaa laga yaabaa inuu leeyahay nuxur aad u wanaagsan, sida dukaanka qaxwaha u sameeyo kafee fiican. Laakiin taasi micnaheedu maahan in qofna imaanayo! Waxaa jira xeelado dhowr ah oo kaa caawinaya kobcinta ganacsigaaga oo ay tahay inaad shaqaaleeysid:
Raadinta qaabab kale oo abuurista ereyga afka marketing faallo bogagga kale, ololeyaal fayras, oo hadlaya dadweynaha, kaararka ganacsiga ee blogka, kaqeybgalka shabakadaha bulshada, bulshada Diiwaan-gelinta, isku xirka boggaga kale (iskutallaabta).
Aaway bartaadu? Sidee u egtahay? Sidee dadku ku helaan?
Markii aad furaysid dukaan, waxa ugu dambeeya ee aad sameyn doontid waa inaad dhowr mayl ka dhisto waddo weyn oo aad furto dhismo gurguurta. Waxaad u baahan tahay inaad dhigto dukaanku halka ay dadku ka filayaan inuu noqdo iyo halka ay dadku ka heli karaan.
Sidoo kale waxaad dooneysaa inaad furto dukaan raaxo leh oo dadku rabaan inay ku soo noqdaan. Wadada dhinaceeda waxaa ku yaal dukaan kumbuyuutar ah oo aan ag maray laakiin waligay ma gelin. Gudaha ayaa u eg qol lagu keydiyo oo ay ku yaalliin qalab meel walba. Laakiin markaan galo Best Buy, ma caawin karo laakiin hoos ayaan ugu soo laadayaa darbiga telefishannada shaashadda markasta. Waxaan jecelahay booqashada Best Buy sida ugu badan ee aan jeclahay inaan wax uga iibsado halkaas quruxdeeda darteed.
Booqashadaada ugu horreysa ee dukaankeyga kafeega ah waadna ogtahay inaadan ku jirin Starbucks. Waxaa jira midabyo dhalaalaya, tanno farshaxan, iyo saldhigga barista wuxuu wajahayaa macaamiisha markay lugeynayaan. Idaacadda sidoo kale waxay ku taal meel ka durugsan albaabka hore, sidaa darteed dadka waaweyni waxay haystaan ​​waqti ay ku arkaan cida dukaanka ku jirta oo ay go'aan ka gaaraan dalabkooda. Maaha a khadka wax soo saarka dukaanka loogu talagalay inuu kugu soo galo ama ku soo galo.
Waxaa jira xeelado dhowr ah oo ku saabsan goobtaada iyo qaabka aad u baahan tahay inaad ka fikirto.
Naqshadaynta iyo hirgelinta istaraatiijiyadaha mashiinka raadinta si dadku u helaan boggaaga. Tani macnaheedu maahan inaad bixiso halkii gujis xayeysiis ah - laakiin macnaheedu waa iska diiwaangelinta bartaada Search matoorada, hawlgelinta a robots.txt faylka si aad u keento qaanadaha raadinta, iyo shaqaalaynta Sitemaps si aad u siiso qorshe marin loogu talagalay mashiinnada raadinta si ay ugu dhex wareegaan bartaada, adigoo ogeysiinaya makiinadaha raadinta markaad isbeddelada sameyneyso, iyo qorista mashiinka raadinta waxyaabaha ku habboon.
Xulo magac domain weyn. Taasi waa degmo u fudud dadka inay xasuustaan, kordhinta .com (wali waa muhiim maanta), oo aan lahayn wax dib-u-habeyn ah. Dadku waxay ku xusuusan doonaan yourstore.com, laakiin ma xusuusan doonaan bots-r-us.info. Mararka qaarkood meelihii ugu fiicnaa waa ereyada muhiimka ah ee aad raadineyso. Hal tusaale: balooggeygu wax badan ayuu kaga fiicnaan lahaa qiimeynta SEO haddii magaca domain uu 'suuq geyn' ama 'teknolojiyad' ku dhex jiri lahaa.
Qurxinta goobta. Qaabaynta iyo mawduucyada bartaadu waxay u baahan tahay inay ka tarjunto xirfadda iyo dabeecadda aad rabto inaad muujiso. Waxaan dhihi jiray ha ka welwelin tan - waxay ku saabsan tahay waxa ku jira. Waan qaldamay, in kastoo. Goobaha waaweyni waxay arkayaan faa'iido taraafikada oo leh a design cusub. Marabtaa inaad furto degel 2.0 ah? Hubso waxay u egtahay degel Web 2.0!
Sidee dadka loogu ilaaliyaa bartaada iyo soo noqoshada?
Waad u magacawday mid sax ah, waxaad heshay badeecad sax ah, dadka waad u sheegtay it waxay bilaabayaan inay yimaadaan laakiin sidee u ilaalisaa? Haddii aadan haysan nuxur kugu filan iyo istaraatiijiyad aad dadka kaga celin karto, waxaad waqtigaaga oo dhan ku bixineysaa sidii aad ku heli lahayd booqdayaal cusub halkii aad ku haysan lahayd kuwa aad haysato.
Mawduuc weyn oo soo jiidasho leh taasi waa mid xiiso u leh akhristayaashaada ayaa ka ilaalin doonta inay soo noqdaan.
Goobtaadu ma leedahay RSS quudiyaa? RSS kaliya maahan tiknoolajiyad qabow, laakiin waa istiraatiijiyad haysa qurux badan. Xitaa haddii qof uusan ku soo laaban goobtaada muddo, waxaa laga yaabaa inuu ku turunturoodo quudintooda waqti ka waqti - laga yaabee markaad bixinayso waxay raadinayaan!
Bartaadu ma leedahay ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo Email ah? Mar labaad, tani waa aalad haynta weyn, oo ogeysiineysa rajooyinka xiisaha leh ama macaamiisha horay u muujiyay xiisaha (adoo dooranaya emaylkaaga).
Waxaa jira waxyaabo ka reeban dabcan. Waxaan si daacad ah u isticmaalay Prada picks halkan maxaa yeelay waxaan ka helay maqaalka dukaanka Prada bartamaha meelna… Waxaan u maleynayaa in meel aad u xun ay xitaa noqon karto olole fayras wanaagsan maalmahan!
Tags: dhisida websitemakhaayadda qaxwahamagaca domainpradahayntaSitewaxyaabaha ku jira goobtadukaankawebsiteerayga afka